Izinyathelo ze-3 Zokuvikela I-Blog Yakho Kumacala amakhulu, Amafutha | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 16, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Namuhla bekuwusuku lokuqala lweBlogINDIANA futhi bekumnandi. Ngenze okuningi ukubheka kusuka emcimbini, ngaze ngagijimisa okuphakelayo bukhoma isikhashana.
Iseshini yokuqala engaya kuyo yangishaya yangisusa, kwakungezici zomthetho zokubhuloga. Isikhathi asizange siqhutshwe ngummeli kepha sabhalwa ngu-blogger, u-Andrew Paradies, oqaphele ngempela zonke izinkathazo zezinto ezisemthethweni ezihambisana nokubhuloga. Isihloko besicindezela kangangokuba ngivele ngahlela unyaweni wami futhi ngangeza nesitatimende ekhasini lami lemigomo yesevisi.
1. Faka Umshwana Wokuzikhipha Emthwalweni ku-Blog yakho ngesixhumanisi ku-Footer
Yonke imininingwane nemininingwane enikezwe kuleli sayithi yenzelwe ulwazi kuphela. Martech Zone akwenzi izethulo mayelana nokunemba, ukuphelela, ubukhona bamanje, ukufaneleka, noma ukusebenza kwanoma yiluphi ulwazi olukulesi siza futhi ngeke abhekane nanoma yimaphi amaphutha, ukweqiwa, noma ukubambezeleka kwalolu lwazi noma yikuphi ukulahleka, ukulimala, noma ukulimala okuvela ekubonisweni kwalo noma sebenzisa. Yonke imininingwane inikezwa ngesisekelo se-as-is.
Ukuziphendulela kwenza abantu bazi ukuthi imininingwane abayithola kule bhulogi yenzelwe ukuthi ithathwe njengombono hhayi iqiniso. Yize lokho kubonakala kuhle, ngokusemthethweni akunjalo ngaphandle kokuthi ukusho! Faka isikhalazo kubhulogi yakho namuhla. Kwenze manje! Ungalindi.
Kungcono ukuba ne- nesinqindi kunokuthi ingozi a $ 20 million icala.
2. Qala i-Limited Liability Corporation ye-Blog yakho
Ngokwengeziwe, ngafaka ibhulogi yami ngaphansi ibhizinisi lami elilinganiselwe (Llc). Ukubeka i-Blog ngaphansi kwe-Llc yami, DK New Media ibeka ibhulogi yami ngaphansi kwesambulela senkampani yami (obekulokhu ngiqala i-Llc - kepha ngakwenqaba ukusho lokho ngokubhala ezinyaweni zebhulogi lami).
Akudingeki ukhathazeke ngokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi njengamazwana - lokho ivikelwe ngaphansi kwendatshana 230 yesichibiyelo sokuqala.
3. Sekela i-Electronic Frontier Foundation
Ngingeza ukuthi into yesithathu ongayenza ukuze uzivikele ngokungaqondile ukubhalisa noma ukunikela ku I-Electronic Frontier Foundation.
Le yiyo kuphela inhlangano ebheke ngaphandle futhi elwela amalungelo nenkululeko yama-blogger.
Aug 17, 2008 ku-9: 09 AM
Lokhu ekugcineni kwangikholisa ukuthi ngenze okungenani isinyathelo sokuqala.
Kumigomo yakho yesevisi kunamaphutha amabili amancane esipelingi. Ungahle uthande ukufaka ezinye izinto ezimbili:
1.) Izimpawu zokuhweba ngezabanikazi bazo
2.) Awunawo umthwalo wokuqukethwe oxhumanisa nakho.
UJun 23, 2009 ngo-2: 33 AM
Lokhu kuyasiza impela. Nginamabhulogi aneminyaka engu-3 ubudala futhi angikaze ngibeke umshwalense noma okuthile.
Jul 24, 2011 ku-12: 47 AM
Ngiyabonga uDouglas, ngikwenza lokhu zisuka nje, futhi ngiyabonga noMartin, ngokuletha udaba lwentengiso.